🎇 အဓိပ္ပါယ်: မီးပန်း Emoji အီမိုဂျီ ကူးယူပါ | Emoji အီမိုဂျီ အဘိဓါန် 📓 | EmojiAll ဗမာ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်
🎇 (1F387) 🎇အဓိပ္ပါယ်: မီးပန်း
🎇 ဤသည်မှာတောက်ပသောနတ်သမီးပုံပြင်သို့မဟုတ်မီးရှူးမီးပန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမ်းအနားသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အခိုက်အတန့်များကိုဖော်ပြရန်အဓိကအသုံးပြုသည်။
အီမိုဂျီသင်္ကေတ 🎇 သည် မီးပန်း ဖြစ်သည်က ၀င်းလက်, ပွဲတော်, မီးရှူးမီးပန်း နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်၎င်းကို Emoji အမျိုးအစားတွင်တွေ့နိုင်သည်။ "⚽ လှုပ်ရှားမှုများ" - "🎈 အဖြစ်အပျက်".
🔸 မြို့ကြီးကြီးများတွင်ကြီးမားပြီးအံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောမီးရှူးမီးပန်းများရှိသည်။ 🎇
ဝီကီပီးဒီးယား: 🎇 မီးပန်း
မီးပန်း လက်ဖြင့်ကိုင်ရသော မီးရှုး၊ မီးပန်းဖြစ်ပြီး ရောင်စုံမီးတောက်နှင့် မီးပွားများထုတ်လွှင့်နေစဉ် ဖြည်းညင်းစွာလောင်ကျွမ်းသည်။ ယူနိုပ်တက်ကင်းဒမ်းတွင် နိုဝင်ဘာလ၏ ငါးရက်မြောက်နေ့၊ Guy Fawkes Nighte မီးရှူးမီးပန်းပွဲနှင့် မီးပုံပွဲတွင် ကလေးများ မကြာခဏ အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ Diwali ပွဲတော်အတွင်း ကျော်ကြားသည့် ၎င်းကို Phool Jhadi ဟုခေါ်သည်။ 🔗 မီးပန်း
🌐: ألماسة (ألعاب نارية), Бенгалски огън, Prskavka, Stjernekaster, Wunderkerze, Sparkler, Säraküünal, فشفشه, Cierge magique, फुलझड़ी, Csillagszóró, Sterretje (vuurwerk), Zimne ognie, Бенгальский огонь, Prskavka, Прскалица, Tomtebloss, ไฟเย็น, Maytap, Бенгальський вогонь, 仙女棒.
နေ့စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 555 123
အပတ်စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 645 56
လစဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 575 170
နှစ်စဉ် (ဘာသာစကားအားလုံး) 291 145
🎇 (1F387) အချိန်ကျော်လူကြိုက်များအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | emojiall.com 100 75 50 2502017 2018 2019 2020 2021
ရက်စွဲအပိုင်းအခြား: 2016-04-03 - 2021-03-28
အချိန်အသစ်ပြောင်းပါ: 2021-04-02 17:07:42 UTC
🎇 ဆက်ဆံရေးဇယား | emojiall.com0မီးပန်း🎇 1 ဘောလုံး⚽2လေပူဖောင်း🎈3အလံ − ဂျပန်🇯🇵4ငါးကြင်း တံခွန်🎏5ကြက်ခြေခတ် အလံများ🎌6မီး🔥7မီးသတ်ဘူး🧯 8 မီးရှူးမီးပန်းများ🎆9လမုန့်🥮 10 ဗုံး💣 11 အကွက်ဆင် အလံ🏁 12 ဓားနှစ်လက် ကြက်ခြေခတ်⚔ 13 ကျင်းထဲက အလံ⛳ 14 ပြိုင်ကား🏎 15 မော်တော်ဆိုင်ကယ်🏍️ 16 မြင်းစီးခြင်း🏇 17 ကြက်ခြေခတ် အမှတ်❌ 18 ဓားမြှောင်🗡 19 ဖယောင်းတိုင်🕯 20 တိုက်မိခြင်း💥 21 ဗြောက်အိုး🧨
🎇 တိမ်တိုက် | emojiall.com 14 လမုန့် 14 လမုန့်လမုန... 13 မီးရှူးမီးပန်းများ 13 မီးရှူးမီးပန်းများမီးရ... 12 မီးသတ်ဘူး 12 မီးသတ်ဘူးမီးသတ... 11 မီး 11 မီးမီး 10 ကြက်ခြေခတ် အလံများ 10 ကြက်ခြေခတ် အလံများကြက်ခ...9ငါးကြင်း တံခွန်9ငါးကြင်း တံခွန်ငါးကြင... 8 တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနွေ ဦး ရာသီ 8 တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနွေ ဦး ရာသီတရုတ်န...7ဂျပန်နှစ်သစ်ကူး7ဂျပန်နှစ်သစ်ကူးဂျပန်န...6ဂျပန်နွေရာသီပွဲတော်6ဂျပန်နွေရာသီပွဲတော်ဂျပန်န...5အဖြစ်အပျက်5အဖြစ်အပျက်အဖြစ်အပ...4လှုပ်ရှားမှုများ4လှုပ်ရှားမှုများလှုပ်ရ...3မီးရှူးမီးပန်း3မီးရှူးမီးပန်းမီးရှူး...2ပွဲတော်2ပွဲတော်ပွဲတော် 1 ၀င်းလက် 1 ၀င်းလက်၀င်းလက်0မီးပန်း0မီးပန်းမီးပန်း
Apple နာမည်: Firework Sparkler
သော့ချက်စာလုံးများ: ၀င်းလက် | ပွဲတော် | မီးပန်း | မီးရှူးမီးပန်း
Emoji 🎇 ဘယ်လိုမွေးဖွားတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။ သင်လိုချင်သော Emoji ကိုဖန်တီးရန်အဆိုပြုလွှာကိုမည်သို့တင်သွင်းရမည်နည်း။
တရုတ်၊ ရိုးရာ 🎇 煙花
မလေး 🎇 mercun
တရုတ်၊ သာမာန် 🎇 烟花
ထိုင်း 🎇 ดอกไม้ไฟ
ကိုရီးယား 🎇 불꽃
ဂရိတ် 🎇 αστράκι
ရိုမေးနီးယား 🎇 foc bengal
တူရကီ 🎇 fişek
ဒတ်ချ် 🎇 sterretje
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ 🎇 sparkler